December 2017 - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
Faysal Cali Siyaad Ciidamo aad u hubaysan oo ka socday dowladda Soomaaliya ayaa loo diray guriga Senatar Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid si ay u soo dilaan maadaama lagu tuhmayey inuu guriga joogo. Ciidankaas ayaa […]
Waagii baryaba waxbaa cusub. Tobankii sano ee u danbeeyey Soomaaliya waxaa ku hardamayey dad iska soo horjeeda oo ay kuwana sheeganayaan in ay diin iyo dar alle duulaan u yihiin kuwana ay doonayaa dad ay […]
Shiikh Xasan Daahir Aweys oo ka mid ahaa Shabaab ayaa Muqdisho lagu xiray. Buuq ka dhashay xariggisuna waxaa uu sababay in ciidanku ay garaacaan arga-gaxna geliyaan Cuqaal beeleed, Xildhibaanno iyo Wasiirro hore. Arrintaan ayaan qormadeyda ku […]
Kenya ayaa markii ugu horaysay safaarad ka furanaysa Jamhuuriyadda isku magacawday Somaliland oo aan weli wax aqoonsi ah ka helin caalamka. Phillip Githiora ayaa loo magacaabay inuu noqdo safiirka Kenya u fariisan doono Somaliland taasoo […]
Total Visits: 132,236